हस्पिटल नै बन्न थाले असुरक्षित – Glammandu Online
kusum	 Aug 23, 2020
ग्ल्याममान्डु, काठमाडौं – हस्पिटलका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मै सङ्क्रमण फैलन थालेपछि अस्पतालहरु नै असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।
चितवन जिल्लाका अस्पतालहरुमा ५० भन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएका छन् ।
अस्पतालहरुमा सङ्क्रमण फैलदै जाँदा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । हालसम्म जिल्लामा ३५२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । तीमध्ये ५० भन्दा बढी त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नै छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका गीताञ्जलि ढकालका अनुसार यसै जिल्लामा घर भई यहाँका अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी ४१ जना सङ्क्रमित भएका छन् । सबैभन्दा बढी विपी कोइराला मोमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १७, भरतपुर अस्पतालका १४, चिवतन मेडिकल कलेजमा एक, पुरानो मेडिकल कलेजका तीन जना छन् ।
त्यसैगरी रत्ननगर बकुलहर अस्पताल रत्ननगरका एक, सेन्ट्रल अस्पतालका दुई, मनकामना अस्पतालका एक, नारायणी सामुदायिक अस्पतालका दुई र अन्य साना अस्पताल एवं मेडिकलका तीन जना छन् ।
सो अस्पतालमा भारत र सीमा क्षेत्रका बिरामी बढी आउँछन् । पछिल्लो समय अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा कठिन भएको उहाँले स्वीकार गर्छन ।
रोग अस्पतालमा फैलिएको आशंकामा बिरामी त्रसित भएका छन् । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी समुदायबाटै रोग अस्पताल आएको अनुमान लगाउनु हुन्छ । अस्पतालहरुले उपचारमा विशेष सावधानी पु-याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कोरोनाका बिरामी छुट्याएर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आलोपालो गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उपचार गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसरी सङ्क्रमण बढ्दै गएमा उपचार गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी नै नहुने उहाँको चिन्ता छ ।
चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने कोरोना र अन्य बिरामी एकै ठाउँमा उपचार हुँदा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । दुबैथरि बिरामी एकै ठाउँमा उपचार कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । यससँगै दिर्घरोगीको मृत्यु हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा एक चिकित्सकसहित १२ जना बिरामी सङ्क्रमित भैसकेका छन् । सबै बिरामी एकै ठाउँमा आउँदा कोरोना भएको यकिन नहुने र उपचार गर्नेले कम तयारीमा नै उपचार गर्दा पनि रोग फैलन गएको उहाँ बताउछन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक तिवारी समुदायबाट अस्पतालमा आयो वा अस्पतालमा सङ्क्रमण फैलिएको यकिन भन्न नसकिने बताउनुहुन्छ । अस्पतालहरुमा कोरोना भएका र नभएका दुबैको उपचार भैरहेको छ ।
जिल्लामा अहिले भरतपुर अस्पतालको भरतपुर कोभिड­ १९ प्रयोगशाला र चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा नमूना परीक्षण भैरहेको छ । सङ्क्रमण फैलिएपछि अन्य रोगका बिरामी सकेसम्म अस्पताल जान छाडेका छन् । जानै पर्ने जटिल बिरामी मात्र अस्पताल जान थालेका छन् ।
coronacorona in chitwancorona in nepalGlammandulatest news
कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् आज आइतबारको राशिफल !
भगवान शिवको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् आज सोमबारको राशीफल !